Gladiolus - iintlobo
Phakathi kweentlanzi ezilishumi ezintle zeplanethi ziya kuthiwa zikhankanywe - i- gladiolus , ukumkani weentyatyambo zegadi. Isiqhamo esicacileyo, esingalibalekiyo nesamkelekileyo sithandwa ngabafundi abaninzi abaqholi beeflorists ngenxa yeengcambu ezingavamile. Ezi zixhobo zemihlobiso zihombise umyezo kwaye zikhangeleke njengeziqhamo ngenxa yeendidi zeentyantyambo zeentyantyambo kunye nobukhulu bazo. Kuza kube yimhla, inani leendidi ze gladiolus linenani elincinci lamawaka, ezinye zazo ziyeke ukuba zithandwa ngenxa yokunciphisa ubunzima. Ezinye iintlobo, ngokuchaseneyo, zithatha nje uthando lwabalimi. Siza kujonga i-gladioli engcono kunye neentlobo zazo.
Iindidi ze gladioli
Abalimi abanolwazi bancoma ukuba bahlawule ingqalelo kwi-gladioli yasekhaya, iintlobo zazo ezilungelelaniswe neemeko zethu zemozulu, zihlala zihlala zihlala zihlala zineenkcukacha ezifanelekileyo kwaye zingenakuthobeka. Ukongezelela, ukufumana i-gladioli engcono kwiindidi ezintsha ezitsha, eziza kutsalwa, eziza kukukholisa ngeentyantyambo ezimnandi. Inyani kukuba ukukhethwa kwexesha elidala lihlehliswa ngokuhamba kwesikhathi.
Masiqhekeza iintlobo eziqhelekileyo neziqhelekileyo, kungcono ukuthetha malunga nabameli abangabonakaliyo bokukhethwa kwekhaya lwase-gladioli. Ngaloo ndlela, umzekelo, i-Grand Duchess uElizabethe inomdla ngokugqithiswa kwayo okunamandla kunye nombala omnqabileyo we-salmon-obomvu ogqithisa ngakumbi emacaleni amaqabunga. Intandokazi eyinyaniso yabalimi beentyatyambo - i-gladiolus i-Oscar - iyamkela umbala obomvu obomvu we-velvet buds kunye nokuphakama kwesityalo (kufika kwi-120 cm). Iindidi zikwa-gladioli enkulu, eyaziwa ngeentyantyambo ezinobuncwane. Ibanga leBakala Blue Dali elinomhlaza ongapheliyo ohlaza okwesibhakabhakeni. I-Green Cockatoo engavumelekanga, eyahlukileyo kwiintlobo ze-gladiolus, ihluke kwezinye iintlobo zezimbali ezikhanyayo ezinobumba obomvu kumagqabi aphantsi. I-Grad Kitezh icweba intshontsho ngeentyantyambo ezinobumnandi bombala we-lilac kunye nomda we-lime ophaphakileyo kunye nomgca obomvu. Ukuphakama kwezityalo kufuthi kufinyelele kwisiqingatha semitha, kwaye kwi-inflorescence nganye kukho i-buds ezingama-22.
Phakathi kokuzaliswa kwamanye amazwe, iintlobo ze-gladiolus ezivela eHolland ziyaziwa ngokukhethekileyo. Ngokomzekelo, i-gladiolus iBaccaccio imangazela ngombala weqokrasi ongaqhelekanga weepalali ezonakele. Iindidi ze-Belle de Nui, ezahlukileyo ngeentyantyambo ze-burgundy-ink kunye namaphethelo amnyama eepalali kunye nemigca emhlophe, i-regal kwaye iyabonakala. Iintlobo zeemfesane kunye neembonakaliso zezimbali ze-Inviteit. Esi sityalo kunye neentyantyambo ezinkulu ezinemibala emithathu engavamile. U-Gladiolus Elena uwaziwa ngumbala omnandi we-apricot-obomvu weentyantyambo ezinantantathu kunye nemifuno emhlophe kunye nokufakela okusemhlophe kweepalali.
Ungazifumana njani phakathi kwe-varidial gladiolus?
Ukuze ukwanelise ukulungiswa kwemisebenzi yakho, sincoma ukuba ubhekisele kwikhathalogu ye gladiolus kwiindawo apho izinto zokutyala zithengiswa. Ngokuqhelekileyo kwikhathalogu emva kwegama leentlobo ezahlukeneyo kukho umgca onobumba abathathu. Umqondiso wokuqala, njengomthetho, ubonisa ubukhulu beentyantyambo ze-gladiolus. Ezi zi:
1 - encinane ukuya kwi-6, 5 cm ububanzi;
2 - i-encinci-flowered, ububanzi bufikelela kwi-6.5-9 cm;
3-ephakathi-branched, ukusuka kwi-9 ukuya kwi-11,5 cm ububanzi;
I-4-enkulu-inikwe amandla (11.5 - 14 cm);
5 - enkulu (ukusuka kwi-14 cm nangaphezulu).
Idijithi elandelayo yekhowudi ibonisa umbala weqela lemibala ye-gladiolus, ngokuqhelekileyo ukusuka kwi-0 ukuya ku-9: 0 - emhlophe kunye nohlaza, i-1 - iluhlaza, i-2-i-orange, njl njl.
Kwakhona kwikhowudi kukho ukutyunjwa kwemiqathango yokuqhakaza:
Ii-PR ziintlobo zexesha elidala;
Iimpawu ze-RS zangaphambili;
SP - ephakathi kwexesha;
P - iintlobo zexesha elide;
I-OP iphela kakhulu.
Ukongeza, umnyaka wokuveliswa kunye negama lo kusekwa kuboniswe.
Umhlaba olimayo ene-motor block
Ukucubungula anyanisi ngaphambi kokutyala
IJapan Garden Azalea - Ukutyala nokuKhathalela
I-Plumeria - ekhulayo esuka kwimbewu
Ukuveliswa kwe-currant emnyama ngokutyunjwa ehlobo
Utamatisi - izifo kunye nokulawula kwazo
Ngaba ndihlala phantsi kwenyanga?
Uzuko lwangonyaka wonyaka - ukutyala nokunyamekela
Yintoni ongayifaka kwenyanga epheleleyo?
Hosta - iintlobo
Indlela yokukhawulezisa ukuvuthwa kweetamatato ezihlaza?
Izityalo zemihlaba engapheliyo yomyezo
Ukunyamekelwa kwekhaya kweClavia, imithetho yokuqulunqa
Kutheni iiphupha ezimbi?
Ifoto yamaphephadonga ngombono
Ukuthobela - ezifanayo
I-Cheese Kaimak - indlela yokupheka, into oyidlayo kunye nendlela yokugcina loo mveliso
Ingqondo yengqondo - indlela yokuphatha abantu?
I-fletlet yenkukhu kunye nama-mushroom kwi-oven
Uncinci u-Anna Shulgina?
Emva kokunyanga inja ikati inomsila esiswini
Ukuxhamla kwamajoyina ama-ankle - unyango
Izigqoko eziseSydney 2013
Indlela yokuxhobisa indawo ye-villa?
I-parrot ye-wavy ineentsiba
Ukuphuka kwe-ovary - iimpawu
Unyango lwesibindi emva kotywala
Ukufakwa kweeRicum Rack
Yintoni enceda uMatron oyiNgcwele?
Inkukhu epheleleyo i-oven